Hindiya: Arunachal wuxuu ugu baaqayaa Xarunta inay furato wadooyinka ganacsiga waddo ay raacaan Bhutan, China iyo Myanmar | Wararka Hindiya - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Arunachal wuxuu ugu baaqayaa Xarunta inay furato wadooyinka ganacsiga waddo ay raacaan Bhutan, China iyo Myanmar | Wararka Hindiya
ITANAGAR: Xukuumadda Arunachal Pradesh ayaa Khamiista ugu yeertay Xarunta inay qaadaan tillaabooyin lagu wanaajinayo isku xirnaanta waddooyinka ee lala galo waddamada deriska ah. Myanmar Shiinaha iyo kana yimid Bhutan in la furo jidadka ganacsiga ee u dhexeeya waqooyi-bari iyo waddamadan.
Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga iyo Ganacsiga Tumke Bagra wuxuu ka qeybgalay kulan ay yeesheen Golaha Ganacsiga, oo uu shir guddoominayay Khamiista Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Ururka Piyush Goyal caasimada dalka.
Bagra wuxuu sheegay in dib-u-dhiska Wadada Stilwell Road ay ku xiri doonto gobolka ku yaal dhul la leeyahay ASEAN isla markaana ay bixin doonto jidad ganacsi oo gaagaaban oo ka raqiisan marinnada maraakiibta hadda jira, sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo halkaas lagu sii daayay.
Waxaa dhistay inta lagu gudajiray Dagaalkii Labaad ee xulafada si ay uga caawiyaan ciidamada Shiinaha inay la dagaallamaan Jabbaan, Wadada Stilwell waxay isku xirtaa Hindiya illaa waqooyiga Myanmar iyo Gobolka Shiinaha ee Yunnan iyada oo loo sii marinayo Pangsau Pass ee Arunachal Pradesh (bariga) .
Dib u furista Wadada Pangsau Pass waxay wanaajin doontaa xiriirka ganacsi ee u dhexeeya India iyo Myanmar waxayna ka faa'iideysan doontaa dadka maxalliga ah. Waxay albaab u noqon kartaa waddamada Koonfur-bari Aasiya, ”ayuu yidhi.
Bagra wuxuu kaloo sheegay in dhismaha wadada Lumla ee galbeedka Arunachal Pradesh ee Trashigang, Bhutan, ay kor u qaadi doonto awooda Dalxiiska Tawang.
“Wadada isku xirta Lumla waa mid la isticmaali karo ilaa iyo Warongde, oo ku taal soohdinta Hindiya iyo Bhutan, dhinaca Hindiya. Si kastaba ha noqotee, masaafo dhan toddobo-kiiloomitir oo ka socota Warongde illaa Khinye, Bhutan, wali lama xiriirin. Guwahati iyada oo loo marayo Tashigang waxaa la dhimi doonaa shan saacadood marka la barbardhigo marinka hadda lagu maro marinnada Sela, Bomdila iyo kana yimid Tezpur Wuxuu yidhi.
Bagra wuxuu sheegay in wadada cusub ee loo maro Trashigang ay sidoo kale ka caawin doonto dadka rakaabka ah inay ka gudbaan dariiqa ay hadda marayaan dhul gariirka isla markaana ay Tawang ka caawin doonto sidii dalxiis caalami ah.
Bagra wuxuu kaloo ku boorriyay Goyal inuu dib uga fiirsado cabirka ugu yar ee looga baahan yahay abuuridda aag dhaqaale oo gobolka ah, marka loo eego muuqaalkiisa joornaalada, ayuu yidhi.
Waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la abuuro goobo laga helo tas-hiilaadyo lagu aruuriyo, lagu kala-soocin karo, laguna kari karo wax-soo-saarka beeraha iyo dhir-ka-goosashada wadooyinka la soo jeediyay, ayaa lagu yiri bayaanka.
Bagra ayaa sidoo kale ku baaqday sameynta cutubyo shahaado ah oo loogu talagalay wax soo saarka beeraha iyo dhir dabiiciga ah iyo shaybaarrada falanqaynta cuntada ee xarumaha xakamaynta xuduudaha.
Waxa uu sheegay in xarumaha ganacsiga ee isku dhafan ee ku yaal magaalooyinka xudduudda ah ee u dhexeeya gobollada waqooyi-bari ay caawin doonaan beeraleyda gobolka, bayaanka ayaa lagu yiri.
"Badeecadaha ka yimaada Waqooyi-bari ee loo diro gobollada kale ee dalka waa in loo tixgeliyaa" dhoofinta loo arko "waana in la helo dhiirrigelin dhab ah," ayuu yidhi, isaga oo intaas ku daray in ganacsiga xuduudaha loo maro marinka Pangsau ee gobolka waxaa lagu soo daray heshiis ganacsi laba geesood ah oo dhex maray India iyo Myanmar.
Wuxuu sidoo kale ku boorriyay Wasiirka Midawga inuu furto xarun kastam oo ku yaal Nampong, Degmada Changlang, oo ay ansixisay dawladda Hindiya 1951.
Wasiirka Arunchal Pradesh wuxuu Xarunta ku booriyay inay weydiisato Myanmar inay dhisto kaabayaal loogu talagay kastamka dhulka. u dhow dhanka Pangsau Pass oo dhinacooda ah.
Wasiirka midowga Piyush Goyal ayaa u xaqiijiyey Bagra abuurida gole sare oo dhoofinta dhoofinta ah ee Arunachal Pradesh oo ku takhasustay wax soo saarka beeraha iyo dhir.
Bagra waxay weydiisatay Xarunta inay kordhiso kabitaanka haatan ee 20 ee dhanka alaabta ceyriinka ah iyo inay wax ka beddesho Barnaamijka Horumarinta Wershadaha Waqooyi Bari (NEIDS) si la mid ah, ayuu yidhi.
Wasiirka Arunachal Pradesh wuxuu sheegay in hoos yimaada 2007's Waqooyiga Bari ee Wershadaha Maalgashiga Warshadaha Waqooyi-bari (NEIIPP), kabitaanka 90% loo oggolaaday agab cayriin iyo 50% alaabada dhammeeyey.
Wuxuu sidoo kale weydiistay Wasiirka Midawga inay aqbalaan isqorista qadka offlineka ah ee barnaamijkan sababtuna tahay xariirka internetka ee xun ee meelaha fogfog ee gobolka.
EU waxay ku abaalmarisay 15 milyan oo yuuro qaybta qaxwada